के तपाई मोटो हुनुहुन्छ? मोटो हुनु यी ४ तरिकाले फाइदाजनक – Etajakhabar
के तपाई मोटो हुनुहुन्छ? मोटो हुनु यी ४ तरिकाले फाइदाजनक
ताजा खबर:- एक हालै गरिएको अध्ययनको निष्कर्षमा पत्ता लागेको छ कि बोसोमा पाइने केही सेल्स हाम्रो रोगप्रतिरोधक प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ, जसबाट हामीलाई यो सोच्न तर्फ प्रेरित गर्छ कि के मोटो हुनु पनि कुनै तरिकाले स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ? तर यो साँचो कुरा हो, हामीले कुनै गल्ती गरिरहेका छैनौँ र न त हामीले भनिरहेका छौँ कि बोसो स्वस्थ हुन्छ । तर केही रिसर्च र अध्ययनको अनुसार मोटो हुनुको कारण हाम्रो स्वास्थ्यलाई केही फाइदा प्रत्यक्ष मिल्छ । हुनत: यो विवादस्पद लाग्छ र सामान्य सोचमा ठिक उल्टो छ । यदि तपाई यी फाइदाको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने उल्लेखित कुरामा विशेष ध्यान राख्नुहोस् ।
१-एक राम्रो रोगप्रतिरोधक प्रणाली- पीएसओएस वनमा प्रकाशित एक अध्ययनमा भनिएको छ कि अधिक वजन हुने व्यक्तिको अंगको वरिपरीको बोसो या ओमेन्टम(omentum) शरीरको इम्यून सिस्टमलाई विनियमित गर्न सक्छ, जसले आन्तरिक अंगलाई अझ अधिक नोक्सान पुग्नबाट बचाउन सक्छ । २०१७ मा एक अर्को अध्ययन गरियो, जसमा बताइएको छ कि बोसोमा पाईने कोशिकाले इन्फेक्शनलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ ।
२-स्वस्थ मस्तिष्क- २० लाख मानिसको एक अध्ययनमा भनिएको छ कि अधिक वजन भएका र मोटोपनले ग्रसित मानिसलाई बुढेसकालमा डिमेन्शिया(dementia) हुने सम्भावना कम हुनसक्छ, जुन सामान्य कुराको विपरित छ । जस्तै तपाईले सुन्नु भएकै होला कि प्रायजसो मोटोपनको कारणले बुढेसकालमा हामीलाई थुप्रै स्वास्थ्य समस्याहरू हुनसक्छ ।
३-बलियो हड्डी- रूमटोइड अर्थराइटिस(rheumatoid arthritis-RA), एक अटो-इम्यून समस्या हो, जो जोर्नीको पुरानो सूजनको कारण बन्छ र स्थायी हड्डीको आकार बिगार्ने काम गर्न सक्छ । रिसर्चमा पत्ता लागेको छ कि बढी बीएमआई भएका मानिसको हड्डीको आकार बिग्रने स्थिति देखि अधिक सुरक्षित हुन्छ । यस जर्नलमा छापिएको एक अध्ययनको अनुसार, अधिक वजन भएका पुरुषलाई रूमटोइड आर्थराइटिसको जोखिम कम हुन्छ ।
४-लामो जिन्दगी- द जर्नलमा अमेरिकन मेडिकल एसोसियसनमा एक अध्ययनमा प्रकशित भयो जसबाट पत्ता लाग्छ कि अधिक वजन भएका मानिसलाई रोगहरूबाट हुने मृत्युको खतरा ६ प्रतिशत कम हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २९, २०७४ समय: २१:४३:२५